संखुवासभामा कहाँ कहाँ हिउँ पर्यो ? हेर्नुहोस फोटैफोटो « Emakalu Online
संखुवासभामा कहाँ कहाँ हिउँ पर्यो ? हेर्नुहोस फोटैफोटो
खाँदबारी । सङ्खुवासभामा शुक्रबार साँझदेखि लगातार बर्षातसँगै परेको हिमपातको कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ । जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रमा करिव पाँच फिटसम्म हिउँ जमेपछि नागरिकहरु समस्यामा परेका हुन् ।
जिल्लाको किमाथाङ्का क्षेत्र, बसन्तपुर, गुफापोखरी, चित्रे, मिल्के, मुढे, देउराली लगायतमा लगातार हिउँ परेको छ । हिउँ परेपछि डाँडाकाडा सेताम्मे भएको छ । हिमपातका कारण पशु चौपायहरुमा बढी असर पुगेको छ भने नागरिकहरु घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । बाँधिएका पशु चौपायलाई घाँस पानी दिन नसकिएको किमाथाङ्काका थुजुक भोटेले जानकारी दिनुभयो ।
किमाथाङ्का क्षेत्रमा पाँच फिटसम्म हिउँ जमेको किमाथाङ्का प्रहरी चौकीले जनाएको छ । त्यस्तै, बसन्तपुर, गुफापोखरी, चित्रे, मिल्के, मुढे, देउराली लगायतका क्षेत्रहरुमा पनि अढाईफिटसम्म हिउँ जमेको छ । सङ्खुवासभा प्रवेश गर्ने दुई मार्ग मध्ये बसन्तपुर क्षेत्रको सडक हिमपातको कारण अवरुद्ध भएको छ । माथिल्लो बाटो भएर विराटनगर, ईटहरी र धरानबाट छुटेका सवारीसाधनहरु विच बाटोमा रोकिएको छ ।
यसरी विभिन्न स्थानमा परेको बाक्लो हिमपात तत्काल पग्लिने सम्भावना कम रहेकोले जनजीवन सामान्य अवस्थामा आउन केही दिन लाग्ने देखिएको छ । अहिलेपनि हुस्सु लाग्ने र पानी पर्ने क्रम जारी रहेकोले थप हिमपात हुनसक्ने सम्भावना छ ।